Esi Email Email Gị na Compendium
Vidio: Nkọwapụta: BCC Blog gị?
Friday, April 15, 2011 Saturday, January 23, 2021 Douglas Karr
Nke anyi ga esote Martech Zone video bụ na folks na m maara na n'anya - Ngwakọta. Oh ee, Enwekwara m òkè na njikwa ọdịnaya na ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ.
Ebe obu na enwerem oke, achoghi m ikwu maka ha oke ọtụtụ, ma n'oge na-adịbeghị anya ha na-arụ ọrụ dị egwu. Nke a bụ ihe kachasị ọhụrụ na usoro vidiyo anyị na ụlọ ọrụ teknụzụ Ahịa.
Okwu Chris na Compendium nke ọdịnaya site na ebe ọ bụla, ruo ebe ọ bụla bụ ntụpọ na. Zụlite usoro ebe onye nnọchi anya ndị ahịa gị nwere ike ịzaghachi email, mgbe ahụ email ahụ nwere ike ịdaba na post blọgụ (mgbe ị gachara site na nkwenye na usoro nhazi) dị egwu. Max dị mma na - ụlọ ọrụ na-ewepụta nde kwuru nde nke ọdịnaya kwa ụbọchị ma ghara itinye ya.
Compendium na-aga n'ihu na-agbanwe n'okporo ụzọ a ma na-enye akụrụngwa nwere ike ịkwado ndị otu kachasị. Ọ bụ azịza dị mfe maka nsogbu siri ike. Ekele Frank Dale - Onye isi oche ọhụrụ nke Compendium. Mgbe ọ nọrọ ụfọdụ oge na Frank ikpeazụ izu ole na ole, ọ na-n'ezie nwetara ya aka na usu nke ebe ụlọ ọrụ na-aga yana mkpa nke ụlọ ọrụ maka leveraging ọdịnaya… n'ebe ọ bụla, n'ebe ọ bụla!
Daalụ ndị otu na 12 Kpakpando Media maka nnukwu mmepụta ọzọ! Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ ma chọọ ka a mata gị na usoro vidiyo anyị - kpọtụrụ anyị. Ọ bụrụ n ’ekpuchi mmefu mmefu (dị oke ọnụ) ma tinyela nnukwu ihe ọnụ - anyị ga-ebipụta ya!
Nnyocha ndị dị mfe na Email Platform ọ bụla
Naanị ụfọdụ nkọwa teknụzụ: Ọ kachasị mma ịnwe igwe okwu ikwu okwu na igwefoto na igwefoto; na vidiyo a igwefoto igwefoto nke abụọ bụ kpam kpam, na-egosi naanị profaịlụ nke ọkà okwu. Dị ka o kwesịrị, Igwefoto kwesịrị ịdị naanị n'ubu nke onye na-agba ajụjụ ọnụ, na-enwe ọkara iji mechie isi okwu. Igwe ọkụ dị mma, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị mma, ebe ọ na-egosi mmadụ abụọ ahụ na profaịlụ, yabụ a ga - eji ya dị ka nsogbu - oge ọzọ m ga - eme ka igwefoto dịtụkwuo na onye na - agba ajụjụ ọnụ, si otú a na - akwado onye na - agba ajụjụ ọnụ. Oghere ahụ dị mma na onye na-agba ajụjụ ọnụ na-eche ihu igwefoto.
E tinyeghị igwe okwu kacha mma, si otú a na-elebara ụlọ ahụ anya nke ukwuu.
Ma nnukwu na ị na-eme vidiyo dị ka nke ahụ, daalụ!
gnurx, okwu teknụzụ gị dị mma. Daalụ maka ịkekọrịta! Ndị otu anyị na-arụ ọrụ oge niile iji melite ogo vidiyo anyị ma nwee ekele maka nzaghachi. Nwere olileanya i nwere ike isonyere anyị ọzọ ọnwa na-abịa maka ihe nkiri vidiyo ọzọ.